शिवम् सिमेन्ट : ब्राण्ड भनेको ब्राण्ड नै हो | नेपाल आज
शुक्रबार, २५ पुष २०७६ गते मा प्रकाशित
काठमाडौँ । शिवम् सिमेन्ट । पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा रहेको सिमेन्ट । हुन त बजारमा अनेक थरीका सिमेन्ट पाइन्छन् । घर बनाउनु पर्दा वा कुनै पनि निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न जानु पर्यो भने व्यापारीले अनेक थरी सिमेन्टको बखान गर्छन । तर ग्राहकको छनौट, मुख्य कुरा रहन्छ । किनकी जीवनभरको कमाई, ऋणधन गरेर निर्माण गरिने निर्माण सामग्रीमा कोही कसैले हत्तपत्त सम्झौता गर्न चाहन्न । बरु उच्च क्वालिटीको सिमेन्ट पहिलो रोजाइमा पर्छ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड यो मामिलामा निर्विकल्प छनौट हो यसको कुनै विकल्प छैन । अन्य सिमेन्ट भन्दा शिवम् सिमेन्ट के कति कारणले फरक छ त ?
क्वालिटी अर्थात् गुणस्तर
शिवम् सिमेन्ट क्वालिटीमा एक नम्बर भनेपनि फरक पर्दैन किनकी यसले बजारमा आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेको छ । यसको नारा नै छ ‘क्वालिटीको मामिलामा नो कम्प्रोमाइज’ अर्थात् गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन्न । शिवम् सिमेन्ट गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने सिमेन्ट हो । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण नेपाल सरकार गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट यो सम्मानित हुनु हो । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड सिमेन्ट जगत्मैँ पहिलोपटक नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने N.S. Quality Award-2019 बाट प्रथम भई सम्मानित भएको छ । विभागका एक प्रतिनिधिका अनुसार देशका सबै सिमेन्ट उद्योगबाट नमुना लगेर परीक्षण गर्दा शिवम् सिमेन्ट सरकारले तोकेको मापदण्ड र ग्राहकको रोजाईका आधारमा सर्वप्रथम हुन सफल भएको हो । उनी भन्छन्–‘सिमेन्टको क्वालिटी भनेको छोएर छामेर थाहा हुने होइन । राम्रो छ कि छैन भनेर चिनिने भनेको यसको परीक्षण गरेर हो । परीक्षण सरकारले गरेको हो । सरकारमा विश्वासको वातावरणको सिर्जना शिवम सिमेन्टले गर्यो ।’
यस्तो अवार्ड के हो त ?
N.S. Quality Award-2019 नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने उच्चकोटिको अवार्ड हो । गुणस्तर चिन्ह हरेक सिमेन्टले लिएपनि क्वालिटी उच्च कोटिको छ वा छैन भनेर सरकारले नै परीक्षण गरेकाले यो निकै महत्वपूर्ण अनि चासोको विषय हो । जसमा सम्पूर्ण सिमेन्टहरुमध्ये खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी निरन्तर सर्वोत्कृष्ट वस्तु उत्पादन गर्ने, सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको स्वतन्त्र परीक्षणबाट उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्योग छान्ने गरिएकोमा यस पटक शिवम् सिमेन्टमा तोकिएका सबै क्वालिटी उच्चकोटिकै पाइएकाले सम्मानित गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागका अनुसार N.S. Quality Award-2019 सिमेन्ट जगतमा पहिलो पटक शिवम् सिमेन्टलाई प्रदान गरिएको हो । शिवम् सिमेन्ट गुणस्तरीय एवम् उत्कृष्ट उत्पादन हो भन्ने कुरा यो अवार्डले पुष्टि गरेको छ ।
“गुणस्तरको पहिचान हो शिवम्”, “गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगरौँ” तथा Quality को मामलामा No Compromise, जस्ता मुल नाराका साथ अगाडि बढिरहेको शिवम् सिमेन्ट्सले आफ्नो गुणस्तरीय उत्पादन तथा बिक्री वितरण र बिक्री पछिको प्राविधिक सेवाको कारणले पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको हो । शिवम् Quality को मामलामा No Compromise भन्दै देशको विभिन्न ठुला–ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आफ्नो महत्वपुर्ण भुमिका निभाउँदै आएको छ ।
त्यसो त शिवम् सिमेन्ट नेपालको केन्द्र भाग तथा प्रदेश तीनको प्रस्तावित राजधानी हेटौँडामा स्थापित छ । सन् २००९ मा यस सिमेन्ट उद्योगले अत्याधुनिक जर्मन प्रविधियुक्त प्लान्टबाट आफ्नै चुनढुङ्गाकोे प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको क्लिंकर र शिवम् सिमेन्ट तथा शिवम प्लस सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । उच्च गुणस्तर, निरन्तर सेवा र विश्वसनीयताको कारणले गर्दा नै शिवम् सिमेन्ट ग्राहकहरुद्वारा अत्यधिक विश्वास गरिएको र रुचाइएको असली OPC सिमेन्ट बन्न सफल भएको हो । शिवम्ले नेपाल सरकारबाट एन एस चिन्ह अर्थात नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ । नेपाल गुणस्तर चिन्हका साथै NS/ISO 14001:2015, NS/ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISI, र URS प्रमाणित शिवम् सिमेन्टले देशको असहज परिस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा तथा सुविधा दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको नेपाल इनर्जी खपत कार्यक्रमसँग जर्मन सरकारको केएफडब्लु भन्ने जर्मन सहयोग अन्तर्गतको ’फाइनान्सिएल को अपरेशन फर द प्रोमोशन अफ इनर्जी इफिसेन्सी’ नामक कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमार्फत नेपालमा स्थापित उद्योग मध्येबाट energy efficiency को आधारमा पावर अफ इनर्जी अडिट रिपोर्टको सुझाव अध्ययन गरी शिवम् सिमेन्ट उद्योग सर्बोत्कृष्ट घोषित भएको थियो । जसमा शिवम् सिमेन्ट कम्पनीले एक करोड पाएको थियो ।
शिवम् सिमेन्ट सन् २००३ मा स्थापना भएको हो । सन् २००९ मा यस सिमेन्ट उद्योगले अत्याधुनिक जर्मन प्रविधियुक्त प्लान्टबाट आफ्नै चुनढुङ्गाकोे प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको क्लिंकर र शिवम् सिमेन्ट तथा शिवम प्लस सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । अहिले यो उद्योग नेपालकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रुपमा स्थापित भएको छ । यस उद्योगले दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । एक टनमा एक हजार किलो हुन्छ । कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरुले भारतबाट क्लिन्कर ल्याएर नेपालमा धुलो बनाउने र प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्छन् । तर शिवम् आफैंले दैनिक १ हजार ९ सय टन क्लिंकर उत्पादन गर्छ । तर पनि क्वालिटीमा भने शिवमले कत्तिपनि सम्झौता गरेको छैन । किनकी शिवम् सिमेन्ट आफ्नै विभिन्न खानीहरुबाट उत्खनन् गरी ल्याइएका उच्चकोटिका चुनढुंगा शिवमको उद्योगसम्म पुग्ने गरेका छन् । उच्चकोटिका चुनढुंगा शिवमको उद्योगमा ल्याउनासाथ पूर्ण रुपले पानीले पखालिन्छ । माटो लगायत अन्य काम नलाग्ने पखालिने गरिएको हो । शिवमको कारखानामा दैनिक ८ हजार टन चुनढुंगा ल्याइन्छ, जहाँ ७ महिना सम्म सिमेन्ट बनाउन पुग्ने ७ लाख टन चुनढुंगा भण्डारण गरिएको छ । जसले अभाव वा समस्या परे पनि ७ महिनालाई पुग्ने सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छ । । शिवमले उत्पादनका हरेक चरणमा गुणस्तरमा कत्तिपनि सम्झौता गर्दैन ।
अन्यको तुलनामा फरक
अन्य सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टबीचको फरक भनेकै यसको क्वालिटी हो । त्यसो त बजारमा दुई थरी सिमेन्ट पाइन्छ । पिपिसी र ओपिसी । दुवै सिमेन्टमाथि ग्रेडिङ गर्न त मिल्दैन तर प्राविधिकहरुको भनाइमा ओपिसी सिमेन्ट अलि राम्रो मानिन्छ । ओपिसीमा ९५ प्रतिशत क्लिंकर हुन्छ भने पिपीसीमा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र क्लिंकर हुन्छ । शिवमले ओपिसी मात्र उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
ओपिसी अर्थात अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट । विश्वमा सबैभन्दा बढी ओपिसी सिमेन्ट नै प्रयोग हुन्छ । ओपिसीको कंक्रिट जब्बर हुने भएकैले यो प्रकृतिको सिमेन्टमा मानिसहरुको बढी विश्वास छ । प्राविधिकहरुले निर्माणको आवश्यकता हेरेर कुन सिमेन्ट उपर्युक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छन् । तर, विज्ञहरुको भनाइमा ओपिसी सिमेन्ट पिपिसी भन्दा राम्रो मानिन्छ । किनकी ओपिसीमा पिपिसी मिसिएमा त्यसको गुणस्तर घट्छ । एक विज्ञ भन्छन्– ‘पिपिसी र ओपिसीमा मुख्य फरक भनेकै क्वालिटी हो ।’ उनी भन्छन् –‘जुन कम्पनीले यी दुवै ओपिसीमा पिपिसीका क्लिंकर मिसिन्छ । एउटै ग्राण्डर प्रयोग गर्दा ओपिसीबाट पिपिसी निकाल्दा केही फरक पर्दैन । तर ओपिसीमा पिपिसी मिसिँदा क्वालिटीमा भने फरक पर्छ ।’
अर्कोतर्फ शिवम् सिमेन्ट अन्य भन्दा फरक भनेकै यसको क्वालिटी परीक्षणले हो । शिवम् सिमेन्टले क्वालिटी परीक्षण मेशिन राखेको छ । क्वालिटी परीक्षण मेशिनमार्फत यसको क्वालिटी परीक्षण गर्ने गरेको छ । सिमेन्ट यसका केमिकल र फिजिकल दुवै टेष्ट हुन्छ । फिजीकल टेष्ट अर्थात् वाटर क्युरिङ गरिराखेका २८ दिनसम्मका क्युबहरुमार्फत सिमेन्टको क्वालिटी चेक भैरहन्छ । अनि क्वालिटीको मापदण्ड यत्तिले मात्र पुग्दैन । एमजिओ अल्कालिक फ्रिलाइम, क्लोराइड लगायत अन्य विभिन्न केमिकल प्रोपर्टीको जाँच गरिन्छ । त्यस्ता सबै केमिकल प्रोपर्टीको जाँच गर्नका लागि शिवमसँग अत्याधुनिक एक्स रे मेशिन छ । सिमेन्टको गुणस्तर जाँच्नका लागि एक्स रे मेशिन नेपालभरका अन्य सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा नौलो छलाङ हो ।
शिवम् र शिवम प्लस
शिवम सिमेन्टका दुई ब्राण्ड छन् । शिवम् र शिवम प्लस । दुवै सिमेन्ट गुणस्तरमा बराबर छन् । तर शिवम ४३ ग्रेडको सिमेन्ट हो भने शिवम् प्लस ५३ ग्रेडको सिमेन्ट हो । ५३ ग्रेड ठूला पूल ठूला भवनका लागि हालिन्छ । सामान्यतया घर बनाउनका लागि ४३ ग्रेडले गर्छ । ढलानका लागि बेष्ट हो । यद्यपि सिमेन्टमा कुनै पनि ग्रेड भने छुट्याईदैन । नेपालमा ग्रेडिङ गर्न पनि पाइँदैन । यद्यपि शिवम प्लस भनेकै थप गुणस्तर र क्वालिटी थपिएको भन्ने हो ।
“शिवम्+” सिमेन्टमा थप अटुट COMPRESSIVE STRENGTH रहेको छ जसले निर्माणलाई थप मजबुत र सवल बनाउने छ । “शिवम्+” ओ.पि.सि. सिमेन्टमा भौतिक तथा रासायनिक गुणहरुमा बजारमा उपलव्ध सिमेन्टहरु मध्ये उत्कृष्ट रहेको छ । “उत्कृष्टताको आकाङ्क्षा, प्रगतिशील जीवनको पहिचान” नारा आत्मसाथ गरेको यो सिमेन्ट पनि मकवानपुर गढी क्षेत्रमा अवस्थित आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट ल्याइएको उच्च कोटीको चुन ढुङ्गा प्रयोग गरी उत्पादन गरिने सर्वोत्कृष्ट सिमेन्ट हो । “शिवम्+” ओ.पि.सि.सिमेन्टको गुणस्तरलाई लामो समयसम्म कायम गर्नको लागि विशेष प्रकारको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ्ग गर्ने गरिएको छ ।
क्वालिटीकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि साझेदारी
हम्मेशी नेपाली उद्योगलाई विदेशीले विश्वास गर्दैनन् । विदेशीले विश्वास नगर्नुको कारण भनेकै नेपालको क्वालिटी हो । तर बजारका अन्य सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा शिवम् सिमेन्ट मात्र यस्तो सिमेन्ट हो जसले चीनको प्रतिष्ठित कम्पनी होङ्शीसँग मिलेर पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । यसको कारक सिमेन्टको क्वालिटी हो । होङ्शी चीनको ठूलो सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हो। होङ्सीले चीनमा रहेका उद्योगबाट मात्र ८० मिलियन टन भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ ।
शिवममा जनताको लगानी
सामान्यतः नेपालका चलेका उद्योगहरुमा जनताको लगानी हुँदैन । तर शिवम् सिमेन्ट यस्तो उद्योग हो, जसले पहिलो पटक पब्लिकका लागि शेयर जारी गरेको छ । जहाँ जो कोहीले जहिले पनि लगानी गर्न सक्छ । स्टक मार्केटमा सूचीकृत शिवमको सेयर खरिद गर्ने हो भने शिवमको मुनाफामा जो कोही हिस्सेदार बन्न सक्छन ।
उच्च गुणस्तर अनि धेरै बिक्री हुने भएकोले उद्योगले मुनाफा पनि राम्रो कमाउँछ । जसका कारण शिवममा लगानी गर्नेहरुले निराश हुनु पनि पर्दैन । आइपिओ बिक्री लगत्तै शिवमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको थियो । शिवमको आइपिओ प्रतिकित्ता ३ सयमा खरिद गरेका लगानीकर्ताहरु अहिले राम्रो मुनाफाको अवस्थामा छन् भने दोस्रो बजारमा खरिद गर्नेहरु पनि सन्तुष्ट रहेको कम्पनीमा लगानीकर्ता ओइरिएकाले पनि देखाउँछ ।
भारत निर्यातको तयारी
शिवम् सिमेन्ट भारतीय बजारमा निकास गर्नेबारे कार्य थालेको छ । नेपालको चुनढुंगा उच्च गुणस्तरको भएकाले सिमेन्टले भारतीय बजारमा ब्राण्ड बनाउनेबारे छलफल भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले भारतको गुणस्तर सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय स्तरको आइएसआइ प्रमाणपत्र (ISI Certificate) प्राप्तगरी भारतबाट समेत सम्मानित भएको छ । उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि शिवम सिमेण्ट भारतमा निर्यात गर्न योग्य सिमेण्ट उत्पादक उद्योग बन्न पुगेको हो । भारतमा सिमेण्ट निर्यात गर्नु अघि भारत सरकारले शिवम सिमेन्टका गुणस्तरसँग सम्बन्धित सबै मापदण्ड हेरेको थियो । जुन शिवम सिमेन्टले पूरा गर्दै आएको थियो । गुणस्तरीय परीक्षणहरुबाट समेत उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट पाइएको हुँदा नेपालमा उत्पादन भई भारतमा निर्यात हुने थोरै वस्तुहरु मध्ये शिवम् सिमेन्ट पनि एक औद्योगिक उत्पादन बन्न सफल भएको हो । गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने भएको कारणले नै शिवम् सिमेण्ट आज यो स्थानमा पुगेको हो ।
यत्र तत्र सर्वत्र छनौटमा शिवम्
शिवम् सिमेण्ट नेपालको ओपिसि सिमेण्टमा अत्यन्त विश्वास गरिएको र पहिलो प्राथमिकता दिइएको सिमेण्ट हो । कम्पनीले हेटौंडामा रहेको जर्मनीको ख्याति प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधि जडित उद्योगबाट स्वदेशी आफ्नै चुनढुँगाको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको क्लिन्कर र शिवम ब्राण्डको सिमेण्ट उत्पादन गर्दै आईरहेको छ ।
कम्पनीले “गुणस्तरको पहिचान हो शिवम सिमेण्ट” र “गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगरौ”भन्ने नारामा अडिग रहँदै आफ्ना उत्पादनहरुलाई आम उपभोक्तामाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा सर्वत्र सजिलै उपलब्धता भएको र उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरुको बिक्री वितरणका कारण शिवम् सिमेण्ट आज देशको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ । शिवम् सिमेण्टले उच्चकोटीको सेवा र आफ्नो विश्वसनीयतालाई निरन्तर कायम राखेकोले नै राष्ट्रिय महत्व एवम् प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा योगदान दिन सक्षम भएको छ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार आयोजना, नेपाली सेनाको नागरिक र भेट्रान्स अस्पताल निर्माण आयोजना, विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु, पुल र सुरुङ्ग निर्माण आयोजनाहरु र ठुला ठूला व्यवसायिक एवं आवासीय घर भवनहरु लगायतका अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजनाहरु हुन् जसमा शिवम् सिमेण्टको प्रयोगबाट निर्माण भईरहेका छन ।
© 2020 Caxton Media